Mpamatsy gazy karbonika ary orinasa mpamokatra karbaona China
Ny karbaona kalsioma misy gloss avo lenta dia voahodina avy amin'ny kalitao voajanahary madio. Ny singa fototra dia CaCO3. Manana fananana simika somary marin-toerana izy io, saika tsy zakan'ny rano, firafitry ny kristaly matevina, ambonin-javatra malefaka, haben'ny poti-panamiana, fahombiazan'ny fanodinana tsara, ary ny fidiran'ny menaka DOP ambany.
Ny nano calcium carbonate dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fomba carbonization matotra sy mandroso, izay manana tombony amin'ny hakitroky ambany, fahadiovana avo, fanaparitahana tsara ary rheology avo.
Ampiasaina betsaka amin'ny famenoana fingotra, plastika, fonosana, inks, sns., Izay mampihena ny vidin'ny toekarena sady mampitombo ny hamafiny, ny tanjaka (ny fanoherana ary ny fiatraikany amin'ny fiantraikany), ny fotsy sy ny famaranana ny vokatra ary manatsara be ny fanodinana. fampisehoana ny polymer.
Ity vokatra ity dia mampiasa kalitao kalitao avo lenta ho toy ny akora, ary vita amin'ny fomba simika miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy ny endrika tsy manam-paharoa. Fotsy fotsy io, tsy misy tsiro ary tsy misy fofona. Aorian'ny fitsaboana fampahavitrihana, ny fizarana ny haben'ny sombintsombiny dia mitovy sy hydrophobic be. Tsiranoka tsara, gloss tsara, ary habetsaky ny famenoana. Izy io dia afaka mampihena ny fitaovan'ny milina fanodinana, manatsara ny teknolojia fanodinana vokatra, manatsara ny fahombiazan'ny vokatra ary misy vokany manamafy kokoa.
Ny karbaona kalsioma mavesatra dia voahodina avy amin'ny kalitao voajanahary madio. Ny singa fototra dia CaCO3. Manana fananana simika somary marin-toerana izy io, saika tsy zakan'ny rano, firafitry ny kristaly matevina, ambonin-javatra malefaka, haben'ny poti-panamiana, fahombiazan'ny fanodinana tsara, ary ny fidiran'ny menaka DOP ambany. Ny karbaona kalsioma mavesatra mavitrika dia aorian'ny fitsaboana fampahavitrihana, miova ny firafitry ny molekiola, mitovy ny fizarana ny haben'ny sombiny, ary tena hydrophobic izy io. Tsiranoka tsara, gloss tsara, ary habetsaky ny famenoana. Izy io dia afaka mampihena ny fitaovan'ny milina fanodinana, manatsara ny teknolojia fanodinana vokatra, manatsara ny fahombiazan'ny vokatra ary misy vokany manamafy kokoa.
Ity vokatra ity dia mampiasa kalitao kalitao avo lenta ho toy ny akora, ary vita amin'ny fomba simika miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy ny endrika tsy manam-paharoa. Fotsy fotsy io, tsy misy tsiro ary tsy misy fofona. Ny hakitroka somary 2.71. Mihena ao amin'ny 825 ～ 896.6 ℃ ary mihena ho calcium oxide sy carbon dioxide tokony ho 825 ℃. Ny teboka mitsonika dia 1339 ° C, ary ny teboka mitsonika dia 1289 ° C amin'ny 10.7 MPa. Tena tsy mety levona anaty rano sy toaka. Izy io dia mety levona amin'ny asidra dilute ary mamoaka gazy karbonika miaraka amin'izay, mampiseho ny fihetsiky ny exothermic. Azo levona koa amin'ny vahaolana klôroza amôniôma. Saika tsy mety ritra anaty rano.